साथीहरूसँग घडी 21
के उनीहरूको दावीको लागि कुनै आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ कि आत्माहरूले मानिसहरूलाई चराहरू वा जनावरहरूमा घुमाउँदछ?
दावीको लागि केहि आधार छ, तर सम्पूर्ण रूपमा कथन असत्य हो। मानवीय आत्माले चराहरू वा जनावरहरूमा पुन: जन्म लिदैन जबसम्म यी सर्तहरू मानवमा लागू हुँदैनन्। मानवको मृत्यु पछि, सिद्धान्तहरू जुन उसको नश्वर भागले बनेको थियो त्यो सम्बन्धित राज्यहरू वा क्षेत्रहरूमा फर्किन्छ जुन उनीहरूबाट नश्वर मानिसको शरीर निर्माणको लागि बनाइएको थियो। त्यहाँ धेरै आधारहरू छन् जुन दावी गर्न सकिन्छ कि मानव प्राण जनावरको शरीरमा जीवन पाउन सक्छ। त्यस्तो कथनको मुख्य कारण अन्धविश्वास र परम्परा हो; तर परम्पराले प्राय: बेवास्ता शाब्दिक रूपमा गहिरो सत्यलाई सुरक्षित गर्दछ। अन्धविश्वास त्यो रूप हो जुन अघिल्लो ज्ञानको आधार थियो। एक जसले अन्धविश्वास धारण गर्छ यसको अर्थ के हो थाहा बिना यसको फारममा विश्वास गर्दछ, तर ज्ञान छैन। आधुनिक समयमा मानिसहरु लाई जनावरहरुमा पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने परम्परामा विश्वास छ र अन्धविश्वास वा परम्परामा टाँसिए किनकि उनीहरु बाहिरको ज्ञान र शाब्दिक बयान लुकाउने ज्ञान हराएको छ। शरीरमा अवतार र मनको पुनर्जन्मको उद्देश्य संसारको जीवनले के सिकाउन सक्छ भन्ने कुरा सिक्दछ। इन्स्ट्रुमेन्ट जसको माध्यमबाट यसले जान्छ पशुको रूप हो। यो मृत्युको बखत एक मानव रूपबाट पार गरिसकेपछि र पुनर्जन्म हुन लाग्दा यो आफैले निर्माण गर्दछ र अर्को जनावरको मानव रूपमा प्रवेश गर्दछ। तर यसले कुनै पनि पशुहरूको प्रजाति प्रवेश गर्दैन। यो जनावरको शरीरमा प्रवेश गर्दैन। कारण यो छ कि कडाई जनावर फार्म आफ्नो शिक्षा जारी गर्न को लागी अवसर प्रदान गर्दैन। पशु शरीर दिमाग मात्र मंद थियो। एक जना जीवनका गल्तीहरू दिमागले जनावरको शरीरमा सुधार गर्न सक्दैन यदि यो सम्भव भएमा दिमागलाई पशुको शरीरमा राख्न सकिन्छ किनकि पशु जीव र मस्तिष्कले व्यक्तिगत दिमागको स्पर्शलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्। मस्तिष्कको विकासको मानवीय चरण दिमागले मानव पशु फार्मलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ; जनावरको दिमाग मानव दिमागले काम गर्नका लागि उपयुक्त उपकरण छैन। यदि सम्भव भएमा दिमागलाई जनावरमा पुनर्जन्म गर्न सकियो भने, दिमाग यति अवतारको रूपमा जनावरको शरीरमा आफैलाई अचेतन हुने थियो। जनावरको शरीरमा मनको यस्तो अवतारको कुनै उद्देश्य हुँदैन किनकि कुनै गल्ती सच्याउन र प्रायश्चित गर्न सकिदैन। गल्तीहरू सच्याउन सकिन्छ, गलत राइट गरिएको छ र पाठ सिकेको छ र ज्ञान हासिल गरेको छ जब दिमाग मानव शरीरमा हुन्छ, र मस्तिष्कलाई सम्पर्क गर्न सक्छ जुन यसको स्पर्शलाई प्रतिक्रिया दिनेछ। यो मानौं कि यो कुनै पनि कानून द्वारा गर्न सकिन्छ कि मानौं जो एक मानव रूप को माध्यम ले काम गरीएको छ जनावरको कुनै पनि प्रकार मा अवतार हुनु पर्छ के द्वारा अनुचित छ।
यो मा भनिएको छ सम्पादकीयमा विचार, वचन, खण्ड। 2, नम्बर 3, डिसेम्बर, 1905, कि: "मानिस सोच्दछ र प्रकृतिले निरन्तर जुलुसमा आफ्ना विचारहरू मार्शल गरेर जवाफ दिईरहेको छ, जबकि उसले आश्चर्यको आँखाले आश्चर्यको कारणलाई हेरिरहेको छ। । । .मानले सोच्दछन् र प्रकृतिलाई उसको सोचले फल दिन्छ कि प्रकृतिले उसको विचारहरुका बच्चाहरुका रुपमा सबै जैविक रूपहरुमा उनको सन्तान जन्माउँदछ। रूखहरू, फूलहरू, जनावरहरू, सरीसृपहरू, चराहरू, आफ्नो रूपहरूमा उसको विचारहरूको क्रिस्टलीकरण हो, जबकि तिनीहरूको प्रत्येक फरक आकृतिमा उसको विशिष्ट इच्छाको चित्रण र विशेषज्ञता हो। प्रकृति एक दिइएको प्रकार अनुसार पुनरुत्पादित गर्दछ, तर मानिसको विचारले प्रकारलाई निर्धारित गर्दछ र प्रकार परिवर्तन गर्दछ केवल उसको सोचाइबाट। । । .पशुका शरीरहरूमा जीवन अनुभव गरिरहेका निकायहरूको व्यक्तित्व र स्वभाव उनीहरूले सोच्न नसक्दासम्म मानिसका सोचाइले निर्धारण गर्नुपर्दछ। तब उनीहरूलाई अब उसैको सहायताको खाँचो पर्दैन, तर आफ्नै रूपहरू पनि बनिनेछ जस्तो कि मानिसको सोचाइले आफ्नै र आफ्नै बनाउँदछ। "मानव संसारका बिभिन्न विचारहरूले कसरी भौतिक संसारको बारेमा काम गर्दछन् भनेर अझ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? विभिन्न प्रकारका जनावरहरू उत्पादन गर्न, जस्तै सिंह, भालु, मोर, र्याटलस्नेक?
यस प्रश्नको जवाफ दिन एक लेख लेख्नु पर्छ जस्तै एक वर्ड सम्पादकीय। मित्रहरूसँग मोमेंट्स समर्पित ठाउँमा यो कार्य गर्न सकिँदैन, र यो म्यागजिनको सम्पादकीय विभागमा छोडिनु पर्छ। यद्यपि माथिको उद्धरणमा उल्लेख गरिएको कुरा पूरा भएको सिद्धान्तलाई रूपरेखा बनाउन हामी प्रयास गर्नेछौं।
सबै जीवित प्राणीहरूमध्ये मानिस एक मात्र त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग रचनात्मक संकाय रहेको छ (जसरी प्रोक्रिएटिभबाट भिन्न छ।) रचनात्मक संकाय उसको सोच र इच्छाको शक्ति हो। विचार मन र इच्छा को कार्य को उपज हो। जब दिमागले कार्य गर्ने इच्छामा सोचाइ उत्पन्न हुन्छ र चिन्तनले विश्वको जीवनमा यसको रूप लिन्छ। यो जीवन पदार्थ एक सुपर भौतिक विमान मा छ। विचारहरू जुन रूप लिन्छन् विचारको विमानमा सुपर-फिजिकल स्टेटमा अवस्थित हुन्छन्। मानव दिमागले काम गरेको एक ब्रह्माण्ड सिद्धान्तको रूपमा इच्छा दिमागको प्रकृति र चाहना अनुसार विचारहरू उत्पन्न गर्दछ। यी विचारहरु दिमाग र इच्छा को प्रकृति अनुसार। यी विचारहरू उत्पादन भएको बित्तिकै प्रकारहरू हुन् जुन विश्वमा देखा पर्दछ, र यी प्रकारहरू प्रकारका केही संस्थाहरू वा जीवनका चरणहरूद्वारा एनिमेटेड हुन्छन जुन आफैले फारमहरू सिर्जना गर्न सक्दैनन्।
मानिस भित्र उहाँ संसारमा हरेक पशुको प्रकृति छ। प्रत्येक पशु प्रकार वा प्रजातिहरु एक विशेष इच्छा प्रतिनिधित्व गर्दछ र मानव मा पाउन सकिन्छ। तर सबै जनावरका स्वभावहरू मानिसमा भए पनि ऊ, जसको प्रकार उसको हो, मानव हो र उहाँमा भएका पशुहरू पनि त्यस्तै समयमा देख्न सकिन्छ जब कि उहाँ जुनसुकै इच्छा र चाहनालाई उहाँद्वारा ग्रहण गर्न र आफ्नो प्रकृति प्रकट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यो जस्तो देखिन्छ कि सबै जनावरहरू यति धेरै किस्तिहरू थिए जुन सँगै खींचिएको थियो र उसको शरीर भित्र घाइते थियो र ऊ सबै पशु सृष्टिहरूको समग्र जनावर हो। एक मान्छेको अनुहार हेर्नुहोस् जब उसलाई जोशको परोक्सिम द्वारा समातिएको छ, र तत्कालीन प्रमुख जनावरको प्रकृति उहाँमा स्पष्ट देखिनेछ। ब्वाँसो अनुहारबाट बाहिर हेर्छ र उसको तरिकाले देख्न सकिन्छ। बाघले उसलाई मार्न लगायो मानौं ऊ आफ्नो शिकारमा हतार गर्छ। सर्पले आफ्नो बोलीबाट हिसकाउँछ र उसको आँखामा चमक आउँछ। सिंह क्रोध वा वासनाको रूपमा गर्जन गर्दछ आफ्नो शरीरमा काम गर्दछ। यी मध्ये कुनै पनि अर्कोलाई स्थान दिन्छ किनकि यो उसको शरीरमा जान्छ, र उसको अनुहारको अभिव्यक्ति पनि प्रकारमा परिवर्तन हुन्छ। जब मानिस बाघ वा ब्वाँसो वा स्यालको प्रकृतिमा सोच्दछन् कि त्यसले बाघ, ब्वाँसो वा स्यालको विचार सृजना गर्दछ, र विचार जीवनको संसारमा रहन्छ जब सम्म कि यो तलको मनोवैज्ञानिक संसारमा नबढुञ्जेल यस रूपलाई रूप दिन्छ। निकायहरू प्रक्रियाको माध्यमबाट अस्तित्वमा आउँदछ। यी सबै बिभिन्न प्रकारका फार्मका माध्यमबाट जान्छन् र चित्रहरू पर्दा पछाडि सारिँदा मानिसको अनुहारमा अभिव्यक्ति दिइन्छ। यद्यपि यो ब्वाँसोलाई स्याल अथवा बाख्रा जस्तो बाघ जस्तो देखिन्छ वा यी मध्ये कुनै पनि सर्पजस्तो देखिन्छ। प्रत्येक जनावरले आफ्नो प्रकृति अनुसार कार्य गर्दछ र आफु भन्दा अरु कुनै किसिमको पशु जस्तो काम गर्दैन। यो यस्तो छ किनकि कोटेशनमा भनिएझैं, र पछि देखाइनेछ, प्रत्येक पशु एक विशेषज्ञता हो, मानिसमा चाहेको विशेष प्रकारको हुन्छ। सोचाइ संसारमा सबै प्रकारका सृष्टिकर्ता हो, र मानिस एकमात्र जनावर हो जसले सोच्छ। उहाँ शारीरिक संसारको सम्बन्धमा खडा हुनुहुन्छ किनकि सृष्टिकर्ता, मानिससँग सम्बन्धित छ। तर त्यहाँ अर्को तरिका छ जुन मानव शारीरिक संसारमा जनावरहरूको उपस्थितिको कारण हो। यसले पुरानो धर्मशास्त्रको भनाइको अर्थ पनि बुझाउछ र मानिस पुनर्जन्म हुन सक्छ वा जनावरहरूको शरीरमा सार्न सक्छ। यो यो हो: जीवनको क्रममा मानिसमा इच्छा एक गुणा पशु सिद्धान्त हो, जसको कुनै निश्चित रूप हुँदैन। मानिसको जीवनको क्रममा, उहाँमा चाहा सँधै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र कुनै निश्चित प्रकारको जनावर उहाँसँग लामो समयसम्म प्रमाणमा रहँदैन। ब्वाँसोको पछाडि स्याल, भालुद्वारा स्याल, बाख्राको भाले, भेडा र बाख्राको मासु र अन्य कुनै पनि क्रममा पछ्याउँछ, र यो जीवनमा निरन्तर चलिरहन्छ जबसम्म कुनै मानिसमा स्पष्ट प्रवृत्ति नभएसम्म धेरै जनावर मध्ये एक आफ्नो प्रकृतिमा अरुलाई हावी बनाउँछ र ऊ भेडा वा स्याल वा ब्वाँसो हो वा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धारण गर्दछ। तर जे भए पनि, मृत्युमा उसको प्रकृतिको बदली चाहना एक निश्चित जनावर प्रकारमा तोकिन्छ जुन अझै पनी समयको लागि मानव सूक्ष्म रूप हुन सक्छ। दिमागले यसको जनावर छोडे पछि, जनावरले बिस्तारै मानवको नियन्त्रणकारी रूपरेखा गुमाउँछ र यसको वास्तविक जनावरको प्रकार लिन्छ। यो जनावर तब त्यस्तो प्राणी हो जसमा मानवता छैन।